HIM | Health in Myanmar » 2012 » January
Azithromycin နဲ့ Ofloxacin ပဋိဇီဝဆေးများ
ကျွန်တော် အခုတလော ဆီးကျင်နေပါတယ်။ ဆီးခဏခဏ သွားချင်တာပါ။ သူငယ်ချင်းများကပြောတော့ အမျိုးသမီး အဖြူဆင်းနေချိန်မှာ သွားထိမိရင် ပိုးတမျိုး ဝင်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီပိုးကြောင့် ဖြစ်တာလို့ ပြောကြပါတယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, News1 comment
HIV ဆေးတွေကလဲ အတူတူပါဘဲ။ ခံစားလို့ရတဲ့ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အစာမကျေတာတွေ ရစေနိုင်သလို ဆရာဝန်တွေကနေသာ သိအောင်လုပ်ကြည့်လို့ ရနိုင်တဲ့ ကျောက်ကပ်၊ အသဲ ထိခိုက်တာမျိုးတွေလဲ ရစေနိုင်တယ်။ တချို့ ဆိုးကျိုးတွေက ရှားရှားပါးပါးသာ ရစေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း (၃)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar2 comments
သမီး ချစ်သူနဲ့ မရည်ရွယ်ပဲ ဆက်ဆံမိတာ 31-11-11 ကပါ။ ရာသီ စလာတာ 16-12-11ကပါ။ ၁ လ ပိုင်း ၁၆ ကျတော့ မပေါ်တာနဲ့ Pregnancy test စစ်ကြည့်တော့ Negative ဖြစ်နေပါတယ်။ 20 ရက်နေ့အထိ လာမလားလို့ စောင့်ကြည်တော့ မလာတာနဲ့ Pregnancy test လုပ်တော့ ၂ ကြောင်း ရေးရေးလေး ပေါ်လာပါတယ်။
Grant performance reports for two Global Fund HIV principal recipients
The Principal Recipients for the Global Fund grant have posted on the Global Fund website their grant performance reports. Check them out.
ART ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုကျိုးများ (၁)
HIV virus ပိုးကနေ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်၊ အရိုး၊ အသဲ၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ နဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကို သက်ရောက်စေနိုင်တယ်။ HIV အတွက်ဆေးဖြစ်တဲ့ Antiretroviral therapy (ART) ကြောင့်လဲ အဲဒီနေရာတွေကို သက်ရောက်စေနိုင်တယ်။
HIV medicines ART ဆေးများ
May be taken with or without food အစာနဲ့ နီးနီး ဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။
Fever, Rash, Nausea, Vomiting, Malaise or Fatigue, Respiratory difficulties* DO NOT RECHALLENGE! ကိုယ်ပူ၊ အနီပြင်ထွက်၊ ပျို့-အန်၊ မအီမသာဖြစ်၊ အားယုတ်၊ အသက်ရှူခက်၊ (အဲလိုဖြစ်ရင် ဆေး ဆက်မသောက်ပါနဲ့)
ART and TB
There are two very important coinfections in people living with HIV in Myanmar: TB and hepatitis C infection. There is an inexpensive treatment for TB. And treating HIV disease decreases TB. Attached is the latest word on TB and HIV.
HIV/AIDS ကာကွယ်ပြုစုကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပမည်
HIV/AIDS ကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေးနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ် ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ အခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ရက်နေ့၊ ညနေ သုံးနာရီ၌ မျှော်စင်ကျွန်းတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Anonymous comment on treatment as prevention
Here is an anonymous comment on 'treatment as prevention'.
အကြိမ် ၉၀၀ တွင် တစ်ကြိမ်နှုန်းသာ လိင်မှတစ်ဆင့် HIV ကူးနိုင်ကြောင်း အသစ်တွေ့ရှိ
အာဖရိကတိုက်တွင် ပြုလုပ်သည့် လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ အရ HIV ရောဂါပိုးရှိသူ လိင်ဆက်ဆံဖက် အချင်းချင်းတွင် အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာမှတစ်ဆင့် ကူးစက်မှုမှာ အကြိမ် ၉၀၀ တွင်မှ တစ်ကြိမ်သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို အသစ်တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသမီးမျိုးပွားအဂါင်္တွင် ဗက်တီးရီးယား ကူးစက်ဝင်ရောက်ခံရသည့်ရောဂါဖြစ်သည် ။ သာမန်အားဖြင့် အမျိုးသမီး မျိုးပွားအဂါင်္အတွင်းတွင် ဗက်တီးရီးယားပိုး အမျိုးအစား များစွာ တွေ့ရလေ့ရှိသည် ။ ၄င်းဗက်တီး ရီးယားပိုး များ၏ အချိုး အစားမညီမျှသောအခါ တစ်မျိုး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပိုသော အခြားဗက်တီး ရီးယားပိုးများ အလွန် လျှင်မြန်စွာ ပေါက်ပွားလာသည် ။
HAARP carries on.